Xog: Qorshe halis ah oo loo dejiyay doorashada iyo lacag badan oo lasoo geliyay Muqdisho – Hornafrik Media Network
By Liibaan Nuur	 On Oct 3, 2020
Xogo xasaasi ah oo la helayo ayaa tilmaamaya inuu jiro qorshe halis ah oo socda, kaas oo caqabad weyn ku noqon kara in dalka ay doorasho ka dhacdo waqtiga lagu balamay.
Ilo wareedyo ku dhow dhow Villa Somalia ayaa sheegay in uu jiro qorshe xooga lagu saarayo soo laabashada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Qorshan ayaa la sheegay in ay soo diyaarisay hoggaanka hey’adda Nabad sugidda iyo sirdoonka Qaranka, waxaana socda qorshe ay NISA xoog iyo xeeladba ku soo saareyso 245-cod oo isugu jira labada Aqal ee baarlamaanka.
Taliyaha hoggaanka dabagalka siyaasiyiinta NISA Cabdullahi Dheere ayaa lagu soo waramayaa in loo dhiibay liiska xildhibaano la doonayo in lasoo saaro, waxaana la sheegay in awoodiisa loo madax-baneeyay, waxuuna goobjoog ka ahaan doonaa soo xulista ergada beel kasta, si loo hubiyo amniga iyo shaqsiga ergada ka mid noqonaya.
Cabdullahi Dheere loo xilsaaray sidii ergada aysan ugu soo dhex-dhuuman laheyn Al-shabaab ,waxuuna awood u leeyahay, sida aan xogta ku helnay, inuu bedelo liiska ergada beesha haduu uu tuhmo magacyada qaar.
Qorshahaan ayaa u muuqda mid la doonayo in lagu naas nuujiyo musharaxiinta taabacsan Villa Somalia, laguna cadaadiyo kuwa kale ee ka aragtida duwan.
Arintaan ayaa la sheegay in ay sabab u tahay in madaxweyne Farmaajo ogolaado in lasoo dedejiyo doorashada xildhibaanada, si aan fursad loo siin mucaaradka hoggaaminta madaxweyne Farmaajo.
Sidoo kale qorshahaan ayaa la sheegay in ay maal-gelineyso dowladda Qatar, waxaana xusid mudan in Taliyaha Nabad Suggida iyo kan hoggaanka dabagalka siyaasiyiinta maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaayeen magaalada Dooxa ee dalka Qatar.
Saraakiil sare oo si dhow ula socda qorshaha NISA oo magacooda ka gaabsaday in loo adeegsado warbaahinta ayaa inoo xaqiijiyay in qorshahaan loogu tala-galay lacag dhan Sagaal milyan oo dollar, waxaana la sheegay in lacagtaas lagu wareejiyey Taliyaha NISA.
Gelinkii dambe ee shalay ayaa la sheegay in garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho ay ka soo degtay diyaarad siday Taliyaha Nabad Sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin iyo kan hoggaanka dabagalka Cabdullahi Dheere, waxaana intii ay soo dagayeen si kooban loo hakiyey dhaqdhaqaaqa garoonka.
Qof meyd ah oo saakay lagu arkay degmo ka tirsan Muqdisho